माया गर्ने मान्छे संग भौतिक दुरी टाढा भए पनि कसरि प्रेमलाई जो,गाइ राख्ने ? (भिडियो सहित) « Etajakhabar
माया गर्ने मान्छे संग भौतिक दुरी टाढा भए पनि कसरि प्रेमलाई जो,गाइ राख्ने ? (भिडियो सहित)
आंफुले माया गरेको मान्छे बाट टा,ढा हुनुहुन्छरु तपाईं धेरै टा,ढा,बाट पनि रो,मा,न्टि,क हुन सक्नुहुनेछ । माया गर्ने मान्छे संग भौतिक दुरीले टा,ढा हुँदा पनि कसरि फोनको माध्यमबट प्रेमलाई जो,गा,इ राख्ने अनि रो,मान्चक बनाइ राख्ने भनेर सिक्न सक्नु हुनेछ ।
रो,मा,न्टि,क कुराहरु गर्नुहोस् ः यदि तपाईं आफ्नो प्रिय मान्छे संग रो,मा,न्टि,क कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने, उसको तारिफ गर्नुहोस्।
कुनै यस्तो कुरा निकालेर आफ्नो पार्टनर को तारिफ गर्नुहोस् जुन उसको लागि खास होस् ।
कहिलेकाहिँ कुनै कुनै कुराहरु प्रत्यक्ष रुपमा भन्दा फोनमा खुलेर गर्न सकिन्छ । तिनै कुराहरु संगै भएको बेला गर्न धेरै अ,फ्ठे,रो लाग्ने गर्छ । जस्तै कि तपाईं फोनमा कुरा गर्दा आफ्नो से,,क्स लाइफको बारेमा पनि खुलेर बोल्न सक्नुहुन्छ । यसरि आफ्नो से,,क्स लाइफको बारेमा खुलेर कुरा गर्दै संगै कल्पना गर्नाले तपाईंहरुको सम्बन्ध म,ज,बुत हुने गर्छ।
बाकिँ भिडियोमा हेर्नुहोला: